Abakhokeli babatyeleli basePraslin babelana ngezinto ezintsha ezibaxhalabisayo noMphathiswa wezoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Abakhokeli babatyeleli basePraslin babelana ngezinto ezintsha ezibaxhalabisayo noMphathiswa wezoKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Abakhokeli babakhenkethi ePraslin badibana noMphathiswa wezoKhenketho
Ukususwa kwezithintelo zohambo ngoorhulumente bamanye amazwe, ukunqongophala kwamathuba entengiso, ukunyathela ubuqhetseba kunye neendlela zokuziphatha, kunye nesidingo sokuphumeza imigangatho emincinci yezorhwebo kuthathe indawo kwingxoxo ezigcinwe nguMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho, uMnu.Sylvestre Radegonde, kunye nabakhokeli babakhenkethi abasuka ePraslin kwintlanganiso emfutshane ebibanjelwe eVallée de Mai ngolwe-Sihlanu, Septemba 24, 2021.
UMphathiswa wabelane ukuba bayasebenza ukuqinisekisa ukuba iSeychelles iyafikeleleka ngakumbi kubatyeleli, ngakumbi abasentshona Yurophu.
Urhulumente usebenza ukuqinisekisa ukuba iSeychelles iyahambelana neemfuno zempilo kunye neenkqubo zokunika ingxelo kwaye isuswe kuluhlu olungelulo olokuhamba.
Kulindelwe ukuba inani labakhenkethi liza kunyuka ngokuqala kwakhona kweenqwelo moya ngabalingane beenqwelomoya.
Intlanganiso kunye nabakhokeli babakhenkethi basePraslin, ebizinyaswe nguNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, uNksk Sherin Francis, kunye noMlawuli-Jikelele omtsha woCwangciso lweMveliso noPhuhliso, uPaul Lebon, ibibanjelwe phambi kwelungu leNdlu yoWiso-mthetho ePraslin, oHloniphekileyo uChurchill Gill. kunye noHloniphekileyo u-Wavel Woodcock, uSihlalo we-Praslin Business Association, uMnu Christopher Gill kunye nabameli be-Seychelles Island Foundation (SIF), amaPolisa ase-Seychelles kunye ne-Seychelles Licensing Authority (SLA).
' entshona Yurophu.
“Sisebenza kunye namaqabane ethu aphesheya ukuqinisekisa ukuba Seytshels iyahambelana neemfuno zabo ngokubhekisele kwiinkqubo zempilo kunye nokwenza ingxelo kunye nokususwa kuluhlu lwabo lokungahambi. Sikwalindele nenani (labakhenkethi) ukuba linyuke ngokuqala kwakhona kweenqwelo moya ngabalingane beenqwelo moya ezivela kwiindawo esihlala kuzo ezifana neCondor kunye neAir France ngeyeDwarha, utshilo uMphathiswa uRadegonde.
Intlanganiso ejolise ekujonganeni nezikhalazo eziphakanyiswe yi-SIF kunye ne-SLA abameli bayo bagxininise ukuba imeko eVallée de Mai sele kunzima ukuyisingatha kwaye inyathelo elifunekayo kwangoko kufuneka lijongane nezenzo zeshishini ezithandabuzekayo zabanye abakhokeli babakhenkethi eziyingozi kwimisebenzi. IVallée de Mai.
Abakhokeli babatyeleli bathi bayavuma ukuba kumkhamo othile ukungangqinelani kurhwebo lwabo, ukunqongophala kokuzilungisa, imigaqo yokuziphatha kunye nentsebenziswano kunika umfanekiso ombi kushishino kubakhenkethi.
Umphathiswa u-Radegonde ucebise ukuba zonke ii-arhente zisebenzisane ukuphonononga imigaqo-nkqubo ezisebenza phantsi kwayo izikhokelo zabatyeleli, ukwazisa abathathi-nxaxheba ukuba iSebe liza kuququzelela iiseshoni zabasebenzi ezijolise ekuphuculeni imigangatho yoshishino kuyo yonke ibhodi, kubandakanya nezo zijolise ekuzilungiseni nasekuphuculeni kwiinkonzo ezinikezelwa kubatyeleli.
Umba wokhuphiswano olungenabulungisa kunye nabakhokeli babakhenkethi olusekwe eMahé abathengisa ukhenketho kunye nohambo lokhenketho ePraslin laphakanyiswa kunye nabakhokeli babakhenkethi besiqithi sasePraslin bebonisa ukuba bayaphoswa ngamathuba anqabileyo asele enziwe okufumana imali kukhenketho.
Ummeli we-SIF wathi ezo ndwendwe azongezi xabiso okanye ingeniso kwindawo ye-UNESCO yeLifa leMveli leLizwe kuba uninzi lwabo alungeni kule ndawo, bakhetha ukuthatha imifanekiso ecaleni kwendlela, kodwa basebenzise izixhobo zepaki, ngalo lonke elixesha bebuza Ingozi kukhuseleko lwabanye abasebenzisi bendlela ngokunjalo, i-SIF ichaze. Le kunye neminye imiba iya kudluliselwa kwabasemagunyeni abachaphazelekayo, u-Radegonde uqinisekisile.
Ephendula kwinkxalabo yabakhokeli babatyeleli malunga nokunqongophala kwamathuba entengiso abawanikwa ziihotele zalapha ekhaya, uPS Francis wathi iSebe lezoKhenketho libeke iqonga lokunceda abezokhenketho ukuba babhengeze iimveliso kunye neenkonzo zabo.
”Siyayazi kwaye siyayiqonda indima ebalulekileyo yentengiso njengenxalenye yempumelelo yeshishini; Ke ngoko, sineqela kwicandelo elijongana nokwazisa indawo esiya kuyo encinci. Ndiyanibongoza nonke ukuba nibhalise kwiqonga lethu leParrAPI eliza kuthi landise ukubonakala kwakho. Ndiza kukhuthaza nabo bonke abakhoyo ukuba batyale imali kwintengiso yakho, ngakumbi kwimidiya yoluntu kuba kulapho abathengi bakhoyo ngoku, ”utshilo uNkosikazi Francis.
Ukudibana kunye ukutyhalela kwicala elinye kuya kunceda ekuphuculeni imigangatho yeshishini Umphathiswa uRadegonde uthe, ekhuthaza abakhokeli babakhenkethi ePraslin ukuba baseke umbutho wokuqhubela phambili umdla wabo kunye noweshishini. Ukuvala intlanganiso, uMphathiswa uRadegonde wayingqina eyakhe inkxaso kushishino lokhenketho ePraslin, ephinda isilumkiso sakhe sokuba iSebe lezoKhenketho namanye amahlakani aza kuqina kubanini abasebenza ngokuzingisa ekwenzeni ubuqhetseba kwaye babonwa njengesoyikiso kwishishini.